Mogadishu Journal » 2019 » January » 23
Shir looga hadlayo dib-u-dhiska dalka oo Muqdisho ka furmay
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta magaalada Muqdisho uga qayb galay shir laba maalin socanayo oo looga hadlayo dib-u-dhiska dalka. Ra’iisul wasaaraha oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dib-u-dhiska dalku uu aad muhiim...
Wax ka ogoow lliiska Xidigaha soo wada maray Chelsea iyo Real Madrid
Ku Biiritaanka Higuain Ee Kooxda Chelsea waxa ay Rikoor hor leh u sameensay kooxaha Chelsea Iyo Real Madrid Waxa uuna Noqday Xidigii 14-aad ee soo wada mara labada kooxood. Liiska Ciyaartooyda soo wada Maray Real Madrid Iyo Chelsea: Geremi 2. Makelélé 3. Panucci 4. Diarra 5....
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan mira dhal ah kula yeeshay safiirrada dalalka midawga Yurub ee Soomaaliya. Ra’iisul wasaare Khayre ayaa danjirayaasha kala hadlay caqabadaha dalka ka...
Faah faahin Ganacsade lagu dilay Suuqa Bakaaraha
Mjournal :-Koox hubeysan ayaa waxa ay galabta gudaha suuqa Bakaaraha ku dileen nin la sheegay in uu ahaa Ganacsade. Ninkaan la dilaya ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Sadaam Maxamed Daahir, waxaana uu u geeriyooday risaas ay dabley kaga dhufteyn qeybta sare ee jirkiisa. Ciidamada...
Wararkii ugu dambeeyay Xiisad siyaasadeed oo ka taagan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya
Mjournal :Khilaaf ayaa soo kala dhex galayo dowlad deegaanka Soomaalida iyo dowladda Federaalka Itoobiya, taasoo dhalisay degenaansho la’aan siyaasadeed oo laga dareemay magaalada Jigjiga. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Muxumed Cumar ayaa labo jeer...
Mid ka mid ah Shaqaallaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha oo Muqdisho lagu toogtay
Mjournal :-Koox hubeysan ayaa maanta Magaalada Muqdisho ku diley nin la sheegay in uu ka mid ahaa shaqaallaha Wasaaradda Arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya. Dilka ayaa ka dhacay Xaafadda Al-Barakah oo la sheegay in uu deganaa, waxaana toogtay Koox ku hubeysan Bastoolado oo...
Mjournal :-Sida ay qortay Wakaaladda Warakka Turkiga ee ANADOLU, Hay’adaha ammaanka dalka Turkiga ayaa sheegay in ay gacanta ku dhigeen ilaa 178 qof oo muhaajiriin ah kuwaasi oo la sheegay in si sharci daro ah ay ku galeen dalkaas. Dadkan la qabtay ayaa isugu jira muhaajiriin u...
Wafdi ka socday Midowga Yurub oo laga hor istaagay safar ay ku tagi lahaayen Kismaayo
Mjournal :-Wafdi ballaaran oo midowga yurub ka tirsan islamarkaana xubnaha qaar ay ka yimaadeen magaalada Nairobi ayaa la sheegay in laga hor istaagay safar ay ku tagi lahaayeen magaalada Kismaayo ee gobalka jubbada hoose. Wafdigan ayaa la sheegay inay doonayeen in kismaayo ay...
Madaxweynaha Kenya oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab
Mjournal :-Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay howlgal lagu ciribtiraayo Al-Shabaabka ka dhex dagaalama gudaha dalka Kenya ka dib markii uu kulan la qaatay Hay’addaha Ammaanka dalka Kenya. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku ku dhawaaqay in dowladda Kenya ay...
Muwaadin Mareykan ah oo Ruushka Maxkamad lagu soo taagay
Mjournal :-Maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa diiday in dammaanad lagu sii daayo nin u dhashay dalkaan Mareykanka oo loo heysto inuu falal basaasnimo ah ka waday Ruushka. Paul Whelan, oo ahaa askari u soo shaqeeyay ciidanka badda ee Mareykanka, ayaa Talaadadi shalay kasoo...